ဝိုင်ဖိုင်ခေါ်ဆိုမှုကဘာလဲ။ | Gadget သတင်း
Juan Colilla | | ယေဘုယျ, တယ်လီဖုန်း
အကယ်စင်စစ်သင်တို့တွင်များစွာသောကျော်ကြား၏ကြားဖူးကြပြီ Wi-Fi ကိုခေါ် ဆို. သို့မဟုတ် "Wi-Fi မှတစ်ဆင့်ခေါ်ဆိုမှုများ" အထူးသဖြင့် WhatsApp တွင်မကြာသေးမီက၎င်း၏လျှောက်လွှာတွင် VoIP ဝန်ဆောင်မှုကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်။
ယနေ့ငါအော်ပရေတာများ၏အနာဂတ်မည်သို့ဖြစ်မည်၊ အမေရိကန်နှင့်အမေရိကန်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ပြီးဖြစ်သော ၀ ိုင်ဖိုင်ခေါ်ဆိုမှုများအကြောင်းသင့်အားပြောပြရန်လာသည်။ ကွဲပြားခြားနားမှု ဤမှသည် WhatsApp၊ Skype သို့မဟုတ်အလားတူဝန်ဆောင်မှုများမှခေါ်ဆိုမှုများသို့။
2 Wi-Fi ခေါ်ဆိုမှုများသည် WhatsApp နှင့် Skype ခေါ်ဆိုမှုများနှင့်မည်သို့ကွာခြားသနည်း။
3 အရာအားလုံးဇိမ်ခံကြည့်, အဆင်မပြေမှုကဘာလဲ?
အ Wi-Fi မှတဆင့်ခေါ်ဆိုမှုများ ၄ င်းတို့သည် ၄ ​​င်းတို့၏အမည်များကိုတိတိကျကျပြောနိုင်သည်။ ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်တယ်လီဖုန်းကွန်ယက်များကိုအသုံးပြုမည့်အစား၎င်းတို့သည်သင်ဆက်သွယ်ထားသော Wi-Fi ကွန်ယက်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အားသာချက်များရှိသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအရည်အသွေးမြင့်အသံလွှဲပြောင်းမှုကိုခွင့်ပြုသည့်ရိုးရာကွန်ယက်များထက် bandwidth များထက်သာလွန်သည်သာမကကျွန်ုပ်တို့အား၎င်းကိုမရောက်ရှိသေးသည့်နေရာများသို့ခေါ်ဆိုမှုများကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ အဆောက်အအုံတစ်ခု၏အတွင်းပိုင်းကဲ့သို့အနိမ့်ဆုံးအင်အားသည်နံရံများကြားတွင်ရှိသောကြောင့်သင်၏စမတ်ဖုန်းလွှမ်းခြုံမှုအားနည်းနေသည်။ သို့သော် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ိုင်ဖိုင်ကွန်ယက်တစ်ခုသို့ချိတ်ဆက်ပါကဤကွန်ယက်ကိုအသုံးပြုသောကြောင့်လွှမ်းခြုံမှုရပ်တန့်သွားနိုင်သည်။ ခေါ်ပါ
Wi-Fi ခေါ်ဆိုမှုများသည် WhatsApp နှင့် Skype ခေါ်ဆိုမှုများနှင့်မည်သို့ကွာခြားသနည်း။
အသိသာဆုံးကွာခြားချက်မှာအောက်ပါလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီလူတစ် ဦး ကို WhatsApp မှဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းအတွက်ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုလုံး၏အသုံးပြုမှုနှင့်လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည်။
1. WhatsApp အက်ပလီကေးရှင်းကိုခေါ်ဆိုမှုကိရိယာနှင့်ခေါ်ဆိုမှုကိုလက်ခံရရှိသူနှစ် ဦး စလုံးတွင်တပ်ဆင်ပါ။
2. သင်နှင့်သင်ခေါ်ဆိုသောအသုံးပြုသူနှစ် ဦး စလုံးအတွက်ထို ၀ န်ဆောင်မှုတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ။
3. သင်နှင့်ခေါ်ဆိုမှုကိုလက်ခံရရှိသည့်အသုံးပြုသူ (ဥပမာအချို့သောအော်ပရေတာများ) အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိပါစေ Yoigo ၎င်းတို့သည်အချို့နှုန်းထားများကိုကန့်သတ်ထားပြီး ၄ င်းတို့၏ဒေတာကွန်ယက်မှတဆင့်ခေါ်ဆိုမှုအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုခွင့်မပြုပါ။
အော်ပရေတာမှ ၀ ိုင်ဖိုင်မှတဆင့်ခေါ်ဆိုမှုကိုရည်ညွှန်းသည့်အခါသို့သော်ဤလိုအပ်ချက် (၃) ခုဖယ်ရှားပစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းကိုဖုန်းထဲတွင်ထည့်သွင်းထားသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မည်သည့်လျှောက်လွှာမျှမလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုအသုံးပြုသူအမည်နှင့်ခေါ်ဆိုရန်သတ်မှတ်ထားသောနံပါတ်များဖြစ်သောကြောင့်မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ နောက်ဆုံးတွင်အသုံးပြုသူနှစ် ဦး လုံးအတွက်ဆက်သွယ်မှုမလိုအပ်ပါ။ အင်တာနက်၊ သို့မဟုတ်ပိုမိုနားလည်စေရန်သင် Wi-Fi မှတဆင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုခေါ်။ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမရှိပဲတယ်လီဖုန်းကွန်ယက်ကို သုံး၍ ဤသူအားသင့်အားဖြေဆိုစေနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့်အတိုင်းအော်ပရေတာသည်ဘာမျှမပေးလိုကြောင်းငြင်းဆိုခဲ့ပြီး WhatsApp ၏ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့မည်သို့တိုင်ကြားခဲ့ကြကြောင်းနှင့်၎င်းတို့အားရိုးရာဖုန်းများနှင့်တူညီသောနည်းတူစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ယနေ့အော်ပရေတာများမှကမ်းလှမ်းသောဇာတိ Wi-Fi ခေါ်ဆိုမှုများသည်သင်၏မိနစ်အစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည်ပုံမှန်ခေါ်ဆိုမှု (ယေဘုယျအားဖြင့်) နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ WhatsApp သို့မဟုတ် Skype ကဲ့သို့အပလီကေးရှင်းများတွင်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာနှုန်း၏ကုန်ကျစရိတ်လျှောက်ထားလိမ့်မည်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာကိုသုံးပါ။
ဤသည်ကိုအသုံးပြု။ ပေမယ့်ဆိုလို အခမဲ့ကွန်ယက် ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါ်ဆိုမှု၏အလေးချိန်မှခေါ်ဆိုမှုနှင့်တယ်လီဖုန်းကွန်ယက်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် (အော်ပရေတာအတွက် ၀ န်ဆောင်ခ 0) ၎င်းတို့သည်ပိုင်ရှင်၏ဝေစုကိုမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုလက်ခံရယူသည်။ ) နှင့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကလုပ်ဖို့နည်းလမ်းအဖြစ်အသုံးပြုနေသည်, ငါ့အမြင်အတွက်ရှက်စရာ, ဤဝန်ဆောင်မှုများမှကျေးဇူးတော်၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုယူသှားသော။
ထို့ကြောင့် Wi-Fi မှတစ်ဆင့်ခေါ်ဆိုမှုများသည် Skype နှင့်ရိုးရာခေါ်ဆိုမှုများမှတစ်ဆင့်ခေါ်ဆိုမှုများနှင့်တူသည်။ တစ်မိနစ်လျှင်ကုန်ကျစရိတ်ကိုမဖယ်ရှားပေးဘဲ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသံအရည်အသွေးနှင့်လွှမ်းခြုံမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
သင့်တွင်ဖုန်းအသစ်ရှိပါက၎င်းကိုလုပ်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မှီဖွယ်ရှိသည်၊ ကံမကောင်းစွာဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်အချို့သောအော်ပရေတာများကသာကမ်းလှမ်းသည် T-Mobile o Sprintနှင့်အမေရိကန်ကဲ့သို့သောနိုင်ငံများနှင့်အချို့သော။ လာမည့်နှစ်များ၌ (ကျွန်ုပ်သည်လများစွာမပြောသောကြောင့်စပိန်အော်ပရေတာများသို့မဟုတ်အခြားနိုင်ငံများမှကုမ္ပဏီများ) သည်ဤနည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပါသောအားသာချက်များကိုခံစားရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
Wi-Fi မှတစ်ဆင့်ခေါ်ဆိုမှုများသည်အနာဂတ်အတွက်အော်ပရေတာများအတွက်ခိုင်မာသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည် VoLTE ခေါ်ဆိုမှုများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်း LTE ဆက်သွယ်မှုမှတစ်ဆင့် Wi-Fi ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနှုန်းထားများကိုကမ်းလှမ်းပါကပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ -Fi, ပြproblemနာ ကျွန်တော်တို့ဟာတယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာတွေအကြောင်းပြောနေတာပါ၊ သူတို့အမြတ်အစွန်းများလေလေပိုကောင်းလေလေအရာအားလုံးစောင့်ဆိုင်းနိူင်လေလေစပိန် 4G မှာဘယ်လိုအသစ်လဲဆိုတာနဲ့အော်ပရေတာတွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုသိဖို့လိုတယ်။ United States တွင် LTE ကိုအသုံးပြုသည် (4G ထက်များစွာပိုမြန်သည်) နှင့် 5G ကိုပင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်သည်။
ဒီအယ်ဒီတာ၏အမြင် ဆိုလိုသည်မှာအခြားအော်ပရေတာတစ် ဦး ၏အသုံးပြုသူများကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပါက Wi-Fi မှတစ်ဆင့်ခေါ်ဆိုမှုများသည်သုညသို့မဟုတ်ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချသင့်သည်။ ထို့အပြင် ၄ င်းတို့ကိုလုပ်ဆောင်ရန်အလျင်အမြန်လုပ်ဆောင်သင့်သည် (သို့) သူတို့၏အပိုင်းအစကို Facetime, WhatsApp, Skype နှင့်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည် ကြွင်းသောအရာ။
(စကားမစပ်၊ ငါလားဒါမှမဟုတ် T-Mobile ဗီဒီယိုထဲမှမိန်းကလေးကအနည်းငယ်ထောင်းနေသလား။ )
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » ဝိုင်ဖိုင်ခေါ်ဆိုမှုကဘာလဲ။
ငါသူတို့မိုဘိုင်းအစွန်းကွန်ယက်ကနေတဆင့်ပို့မက်ဆေ့ခ်ျများထင်ခဲ့တယ် Wi-Fi ခေါ်ဆိုမှုတွေအကြောင်းရှင်းပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Gyf - သူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေရန် iPhone မှကာတွန်းရုပ်ပုံတစ်ခုဖန်တီးပါ
Qditor - Windows၊ Android နဲ့ iOS အတွက်ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်သူ